7 Freaky Zvikonzero Dating Online aizowana You Vanopisa
Munhu wose anenge anzwa kuti mumwe mukomana uyo vakapindira zvomumagaba nokuti akanga ari match.com panguva basa. Unofanira kumboshandiswa uri kudanana Website kana uri kubasa. Inogona kupa pfungwa kuti murege hanya ari ikoko, kana kuti haudi kuita Hedzino mazano kuti achakubatsira kuchengeta mhino yako yakachena uye ugare panhamo paunenge kudanana naye paIndaneti uye unoda vachiri kuita zvakanaka kubasa.
Ukapfugama shure basa renyu
Kutanga, iwe nguva dzose kuva nenguva. Chimwe chikonzero unogona kuti kudzingwa basa kuti kufambidzana paIndaneti haasi kunyange kuita nemi ari paIndaneti kubasa vachiongorora inbox renyu. Kana uchida kugara panhamo, ongorora mashoko enyu panguva yokuzorora masikati kana paunosvika kumba. Regai kunonoka basa.
bhasi Your anofunga kuti kutambisa nguva yako paIndaneti
Chimwe chinhu kuti anopedzisira kuwana iwe vaitiridzira nokuda paIndaneti kufambidzana ari vachiongorora kwako kufambidzana Website inbox kubasa. Uri ikoko kushanda, kwete kuti vachiongorora uri pasocial upenyu. Checking inbox yako ichikosha, asi iwe uchada kuzviita kana iwe uri yokumbozorora kana imwe nguva kuti haufaniri kushanda. zvimwe, bhasi wako anogona kufunga kuti uri kutambisa nguva paIndaneti, uye achaguma vachiridzira iwe uye vakabhadhara munhu “haisi paIndaneti dzose nguva.”
Iwe tarisa sokunge uri kuvanza chinhu
Unofanira kugara vachiziva kuti maitiro ako kunonzwisiswa. Kana uri kuita vasinganzwisisiki kuedza kufukidza chinhu kumusoro kubasa, bhasi wako ichakwanisa vakafungidzira chinhu, uye ipapo kuchengeta pedyo ziso pamusoro pako. Mumwe nyore pitikoti-up uye IRR, uri aenda.
Hausi tefa zvakakwana
Kuva tefa ari mumwe chinokosha zvokufambidzana paIndaneti uye kuva akabudirira upenyu bhizimisi. Ungafanira kuzodzosera kuronga purogiramu yako zvishoma, asi kana mukuru wepabasa yako achinyatsochida chinhu nokuita, nguva naye.
Haufaniri kuisa pfungwa pabasa rako
Unofanirawo kuteerera nesimba yauri kuisa mukati. Kana uri kufunga pamusoro muchapfekei kuti inopisa musi une manheru ano, uri Aisangofunga basa renyu, uye kwete kuisa kwenyu zvakawanda.
Iwe badmouth waunoshandira paIndaneti
wo, iwe havambofaniri badmouth wekambani, kunyange wako paIndaneti dating. Kana boka rako akazoziva nezveizvi, Zvingatoita kuti kudzingwa dzako basa rako, uye hapana munhu anoda kuti. Chengetai zvose zvemagetsi nezvevakuru kwako kumabasa akanaka.
Imi vanosanganisa pamwe zvakaipa vanhu mhando
Pakupedzisira, unofanira chete kazhinji kuedza kugara panhamo. Nokusanganisa pamwe zvakaipa vanhu mhando kungaita kuti mucharoorana kudzingwa basa. Mazano anotevera aya achaita kuti ubudirire zvose zvenyu zvemangwana nyanzvi upenyu.
Pane musungo kuti vazhinji vedu kuwira nokuti kworutivi vasikana vari socialized kuva ...